မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -30 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -29
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -31 →
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သိပ္ပံနည်းကျ သစ္စာဝါဒ
တက္ကသိုလ် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် (၁၉) နှစ်တိတိ ကျင်လည်ကျက်စားလျက် စိတ္တဗေဒနှင့် ဒဿနိကဗေဒ ပညာရပ်များကို အတွင်းကျကျ လေ့လာခဲ့ကြရာမှ သိပ္ပံနည်းပညာအကြာင်းကို တစွန်းတစ သိရှိနားလည်ခွင့် ရရှိခဲ့ပေပြီ။
သိပ္ပံနည်းပညာ၌ ယုတ္တိနည်းကျ အစီအစဉ်ရှိခြင်း၊ (Systematization) စံနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းတည် (Logical arrangement) ဆောက်ထားခြင်း၊ မှားသည်မှန်သည်ဟု အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်ကို ခံယူနိုင်စွမ်းရှိသော အဆိုပြုချက်များ ပါဝင်နိုင်ခြင်း၊ (propositions which can be judged whether true or false) ယေဘူယျ သဘောပြုခြင်း၊ (Generalization) လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး ကြီးငယ်ကျားမနှင့် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး၊ အစမ်းအသပ်၊ အစစ်အဆေးကို ခံယူနိုင်ခြင်း၊ (Verifiable) ကြောင်းကျိုးဆက်နွှယ်မှုများ ပါဝင်ခြင်း၊ (Causal Relation) ကြိုတင်ပြောပြနိုင်ခြင်း၊ (Prediction) တို့နှင့် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျသောအမြင် (Objective outlook) များအပြင် မိမိတို့၏ အမှားကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်စီစစ် စစ်ဆေးလျက် မလိုလားအပ်သည်တို့ကို စွန့်ပယ်ပြုပြင် ပြင်ဆင် မွန်းမံ သင့်သည်တို့ကို ပြုပြင်ပြင်ဆင်မွန်းမံကာ လူ့အကြောင်း၊ လောကအကြောင်း၊ သီတင်းကောင်း သီတင်းမှန်ကို ပေးအပ်ရန် ကြိုးစားတည်ဆောက်ထားသော ပညာရပ်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပေသည်။
တနည်းအားဖြင့် လူ့အကြောင်းသည်၎င်း၊ စကြာဝဠာကြီး အကြောင်းကို၎င်း၊ လူသည် စကြာဝဠာကြီး အတွင်း၌ ဘယ်အခန်းကဏ္ဍ၌ ပါဝင်တည်ရှိနေသည် ဆိုသည်ကို၎င်း၊ ပီပီပြင်ပြင် ထင်ရှားလာစေရန် လူ့ကောင်းကြိုးပြုနိုင်သော အကြောင်းအချက်များကို လူသားတို့အတွက် တင်ဆက်ဖေါ်ပြနေသော နည်းပညာရပ် တစ်ခုပင် ဖြစ်နေပေသည်။
အခြားတစ်ဖက်မှ အနက် ပေးရလျှင်လည်း လူ့အကြောင်း စကြာဝဠာအကြောင်းတို့ကို ဘာကြောင့် ဖြစ်နေရသနည်း။ (WHY) ဟူ၍ . . .
ရှေးဦးစွာ မလေ့လာဘဲ ဘာဖြစ်နေသနည်း၊ (WHAT) ဟူသောမေးခွန်း၏ အဖြေများကို အတွေ့အကြုံအဖြစ် လက်တွေ့စမ်းသပ် စီစစ်လေ့လာသော ပညာရပ် တစ်ခုပင် ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
ဘာဖြစ်နေသည် ဆိုသည်ကို သိရှိပြီးပါမှ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဆိုသည်ကို ဆက်လက်ဆင်ခြင် အကြံထုတ်ရသော ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘာဖြစ်နေသည် ဆိုသည်ကို မသိရှိပါဘဲလျက် ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဟု စိတ်ကူးယဉ် ဆင်ကန်းတောတိုး ဆိုရိုးစကား သိပ္ပံပညာရပ်များ၌ မပါရှိချေ။
လက်တွေ့လေ့လာ သိရှိရသော ခိုင်လုံမှန်ကန်သော အကြောင်းအချက် အပေါ်၌ အခြေစိုက်၍သာ အနုမာန တွေးဆချက်များ ထုတ်နှုတ်၍ လက်တွေ့စမ်းသပ် ကြည့်ရှုလေ့လာကာ ရှေ့နောက်မကိုက်ညီသည် များကို ငြင်းဖျက်လျက် ကိုက်ညီ မှန်ကန်ရာများနှင့်သာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်အပ်သော ပညာရပ် အမျိုးအစားဟု ဆိုရပေမည်။
အဆိုပါ ပညာရပ် နည်းနာနိသျှများနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ (မိမိကိုယ်တိုင် ၁၃ နှစ်တိတိ ဆရာမြတ်ကိုယ်တိုင်ထံ ချဉ်းကပ်လျက် အန္တေ၀ါသိက တပည့်အဖြစ် ခံယူကာ အပတ်တကုတ် ကြိုးစားအားထုတ် ကျင့်ကြံဘူးသော) မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာ နည်းပညာရပ်များကို တင်ပြလိုပေသည်။ ရှေးဦးစွာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် ရုပ်နာမ်အနတ္တ၀ါဒဖြစ်၍ နာမ်ဝါဒမဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြ လိုပေသည်။
နာမ်ဓာတ်နှင့် ရုပ်ဓာတ်တို့သည် ပထ၀ီဝင်ဘာသာမှ – ကုန်းလေသည် ပင်လယ်လေထက် ပူလွယ် အေးလွယ်သည် ဆိုသကဲ့သို့ နာမ်ဓာတ်သည် ရုပ်ဓာတ်ထက် ဖြစ်လွယ်ပျက်လွယ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ရုပ်ဓာတ်မှာ ရှေ့ကဖြစ်ပြီး၊ နောက်မှ ချုပ်သည်။ နာမ်ဓာတ်မှာ နောက်မှ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ရှေးဦးစွာ ချုပ်ပျက်သည်။ ဤသဘောကို အဇ္ဈတ္တ ရုပ်နာမ်အပေါ် စိတ္တာနုပဿနာကို ဉာဏ်ဖြင့် အနိစ္စလက္ခဏာ တင်လေ့ရှိကြသော ၀ိပဿနာ ယောဂီများ ပို၍ အသေးစိတ် သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် နာမ်ဝါဒမဟုတ်၊ ရုပ်နာမ်ဝါဒဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် လူ၌ ရုပ်ကိုအခြေပြုလျက် နာမ်တရား ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။
နာမ်တရားသည် လျှင်မြန်လွန်းလှသဖြင့် ရုပ်ထက် နောက်ကျမှ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ရှေးဦးစွာ ချုပ်ပျောက်သွားရသည်။ ၎င်းနောက်မှ ရုပ်တရားက ချုပ်ပျက်ရသည်ဟု ဂဃနဏ တင်ပြရှင်းလင်းလို၍ ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် ရုပ်နာမ်ဝါဒဖြစ်သကဲ့သို့ သစ္စာဝါဒလည်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် အဆိုးရှုဝါဒ (PESSIMISM) မဟုတ်ချေ။ ဤနေရာ၌ အလျဉ်းသင့်၍ ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် အဆိုးရှုဝါဒမဟုတ် သစ္စာဝါဒ၊ ယထာဘူတ၀ါဒသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း အနည်းငယ်ရှင်းပြပါမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စနစ်တကျ မလေ့လာသူ တော်တော်များများက အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ လက္ခဏာရေးသုံးပါးကို ဆင်ခြင်ရသော ဗုဒ္ဓ၀ါဒအပေါ် အဆိုးရှုဝါဒဟု အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ ရှိနေကြသည်။
ထိုသို့ အထင်လွဲမှားနေကြခြင်းများသည် ဗုဒ္ဓ၀ါဒကိုလည်း နားမလည်၊ အဆိုးရှုဝါဒကိုလည်း နားမလည်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ယေဘူယျပြု ကောက်ချက်ချရပါမူ ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် အကောင်းရှုဝါဒ (OPTIMISM) ဟူ၍သာ ကောက်ချက်ချစရာ ကောင်းနေပေသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် အဆိုးမှ လွတ်မြောက်ရာ ချမ်းသာငြိမ်းအေးသော အကောင်း နိဗ္ဗာန် သည်သာ အမှန်တကယ် တည်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းအပြင် ထို အကောင်း သုခနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ရာ ရောက်ကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းများကိုလည်း အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားသော ၀ါဒအမျိုးအစားသာလျှင် ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
အဆိုးရှုဝါဒ၏ သဘော၌ အကောင်းကို၎င်း၊ အကောင်းကို ရရာ ရောက်ရာ နည်းလမ်းကို၎င်း၊ ဗုဒ္ဓ၀ါဒကဲ့သို့ အဘယ်မှာ ပေးအပ်နိုင်ပါမည်နည်း။ ယခု ဗုဒ္ဓ၀ါဒမှာမူ ဆိုးသည်ကို ဆိုးသည်ဟု ယထာဘူတကျကျ သစ္စာဝါဒီပီပီ ဖေါ်ပြ၍ ထိုအဆိုးကို မဖက်တွယ်ရန် အဆိုးကို စွန့်ပယ်၍ အကောင်းသို့ မြတ်ရာ ချမ်းသာရာ ငြိမ်းချမ်းရာသို့ တက်လှမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း အပြုသဘောဖြင့် ဟုတ်ရာမှန်ရာ ဖေါ်ပြလမ်းညွှန်ထားသော သိပ္ပံနည်းကျ သစ္စာဝါဒမျှသာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
အမိုက်ကင်း၍၊ လင်းစေသော် –
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, စကြာဝဠာ, ရဟန္တာ, သိပ္ပံ, အနတ္တ, အနိစ္စ, မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, စကြာဝဠာ, ရဟန္တာ, သိပ္ပံ, အနတ္တ, အနိစ္စ, မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ. Bookmark the permalink.